loo isticmaalay sida walxaha tabinta budada ah iyo qalabka qurxinta ee sida weyn loogu isticmaalo heerkulka sare. xirtaan iyo aerospace iyo beeraha kale. Maaddadu waxay leedahay habsami u socod wanaagsan, waxay noqon kartaa koronto electrolysis milix la shubay ah iyo xiriiro koronto iyo waxyaabo kale oo la adeegsado. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida tine dhoobada dhoobada ceyriinka ah, walxaha wax lagu dhaqmo
Caanaha molecular TIN
Lambarka CAS 25583-20-4
Sifooyinka hurdi bro
Cufnaanta 5. 449 / cm3.
Isticmaala walxaha loo isticmaalo asowder conductive iyo qalabka qurxinta ee sida weyn loogu isticmaalo heerkulka sare. xirtaan aerospace iyo beeraha kale. Maaddadu waxay leedahay habsami u socod wanaagsan, waxay noqon kartaa milix koronto electrolysis iyo xiriiro koronto iyo waxyaabo kale oo la adeegsado. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay 'torgy torgy', tine dhoobada dhoobada ceyriinka ah, walxaha la isticmaalo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay nitride titanium
Titanium nitide (TiN) wuxuu leeyahay qaab dhismeedka NaCl ee caadiga ah, oo ka tirsan dhudhunka wejiga xuddunta u ah, oo leh shaashadda joogtada ah ee A = 0.4241nm. Atamka atomku waxay ku yaalliin cirifka xagal ee shabag dhererkiisu weji ku-yaal yahay. TiN waa dhisme aan-stoichiometric ahayn, oo kala duwanaanta xasiloonida ay leedahay waa TIN0.37-TIN1.16. Maaddada nitrogen-ka ayaa is beddeli karta illaa xad ah iyada oo aan wax isbeddel ah lagu keenaynin dhismaha TiN. Budada TiN guud ahaan waa jaalle-bunni ah,
ultrafine budada TiN waa madow, kiristaaloyinka TiN waa jaalle dahab ah. TiN dhalaalida barta waa 2950 ℃, cufnaan waa 5.43-5.44g / cm3, adkaanta Mohs waa 8-9, caabbinta kuleylka ee saameynta kuleylka wanaagsan. Waxyaabaha jireed iyo kiimikada ee titanium nitride waxaa go'aamiya waxa ku jira nitrogen. Marka maadada nitrogen-ka ay hoos u dhacdo, xuduudaha xargaha ee titanium nitride ayaa badalkeeda kordha, adkeysiguna sidoo kale wuxuu ku kordhaa microscopically, laakiin iska caabida dhul gariirka ee titanium nitride ayaa hoos udhacaysa si waafaqsan. TiN wuxuu leeyahay dhibic dhalaal sare iyo cufnaan ka hooseysa inta badan biraha kala-guurka.
2. Codsiga nitride titanium
Nitride Titanium wuxuu leeyahay astaamo jireed iyo kiimiko oo wanaagsan, sida barta dhalaalka sare, xasiloonida kiimikada wanaagsan, adkaanta sare, habdhaqanka wanaagsan, hagida kuleylka iyo waxqabadka iftiinka, iwm, taasoo ka dhigeysa inay aad muhiim ugu tahay dhinacyo kala duwan, gaar ahaan qeybta cermet cusub. iyo qurxinta dahabka. Warshaduhu waxay dalbanayaan inbadan oo titanium nitride ah. Sida daahan, nitride titanium waxay leedahay qiimo hoose, iska caabin abrasion iyo caabbinta daxalka, iyo hantidiisa badan ayaa ka fiican daahan faakiyuumka. Rajada arjiga ee titanium nitride waa mid aad u ballaaran.
Waxaa badanaa lagu dabaqaa dhinacyada soo socda:
(1) Daasadku waa mid aad loo kala qaadi karo oo waxaa loo isticmaali karaa daawada caafimaadka iyo stomatology.
(2) Titanium nitride waxay leedahay isku dheelitirnaan yar oo khilaaf ah waxaana loo isticmaali karaa inuu yahay saliid heer kulkeedu sarreeyo.
(3) Titanium nitride, oo leh nuurad bir ah, waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab qurxin dahab ah, oo wuxuu leeyahay rajo codsi wanaagsan oo ku saabsan warshadaha qurxinta dahabka beddelka ah; Nitride Titanium sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida dahaarka dahabka ee warshadaha dahabka. Waxaa loo isticmaali karaa inay tahay wax suurtogal ah in lagu beddelo WC, sidaa darteed qiimaha dalabka maaddada si weyn ayaa loo dhimi karaa.
(4) Adkaansho adag iyo iska caabin duug ah, ayaa loo isticmaali karaa horumarinta aalado cusub, qalabkan noocan cusub ah marka loo eego cimri dhererka qalabka carbide-ka iyo nolosha adeegga ayaa si weyn loo hagaajiyay.
(5) Titanium nitride waa shey dhoobada waxyaabo badan ku shaqeeya. Ku darida qadar cayiman oo ah nitrite nitrite taxane TiC-Mo-Ni ah ayaa si weyn u sifayn kara badarka wajiga adag, sidaa darteed sifooyinka jireed ee shayda ayaa si weyn loogu hagaajiyay heerkulka qolka iyo heerkulka sare, iyo iska caabinta daxalka heerkulka sare iyo caabbinta qiiqa ee Cermet si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Awoodda, adkaanta iyo adkaanta dhoobada ayaa lagu xoojin karaa iyadoo lagu daro
Budada TiN ilaa dhoobada si saami ah. Nanometer Titr nitride waxaa lagu daraa TiN / Al2O3 multiphase nanometer ceramics, taas oo si siman loogu qaso habab kala duwan (sida habka isku qasida farsamada), iyo walxaha dhoobada ah ee la helay oo ay ku jiraan titano nitride nanoparticles waxay ka sameysanayaan shabakad tabinta gudaha. Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay qayb elektiroonig ah oo ku jirta warshadaha semiconductor.
(6) Ku darida qadar cayiman oo TiN ah lebeniyada magnesium-carbon waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa caabbinta nabaad guurka ee lebenada magnesium-carbon.
(7) Titanium nitride waa qalab dhismeedkiisu aad u fiican yahay, oo loo adeegsan karo xoog wax lagu mudaayo uumiga iyo gantaallo. Nitride Titanium sidoo kale waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa jihada iyo siddooyin wax lagu xiro, taas oo muujineysa saameynta wanaagsan ee adeegsiga ee titanium nitride.
(8) Iyada oo ku saleysan habdhaqanka korantada ee fiican ee titanium nitride, waxaa laga dhigi karaa noocyo kala duwan oo koronto iyo la xiriir qalabka fasalka koowaad.
(9) Titanium nitride waxay leedahay heerkul aad u saraysa oo heer sare ah waxaana loo isticmaali karaa inay tahay qalab heer sare ah.
Nitride Titanium wuxuu leeyahay dhibic dhalaalaysa oo ka sareysa inta badan nitrides birta kala guurka ah iyo cufnaan ka hooseysa inta badan nitrides biraha, taasoo ka dhigeysa diidmo qaas ah.
(11) Titanium nitride waxaa lagu dabooli karaa galaaska filim ahaan. Marka laga hadlayo milicsiga infrared ka badan 75%, marka dhumucda filimka nitride-ka titanium ka weyn yahay 90nm, waxay si wax ku ool ah u hagaajin kartaa waxqabadka dahaarka galaaska. Intaa waxaa dheer, adoo hagaajinaya boqolleyda walxaha nitrogen-ka ee ti nitride, midabka filimka ti nitride waa la beddeli karaa si loo gaaro saameynta ugu fiican ee bilicsanaanta.
Titanium nitride (TiN) waa dhisme xasilloon oo xasilloon, kaas oo aan ku falcelin biraha sida birta, chromium, kaalshiyamka iyo magnesium heerkulka sare, iyo TiN karoonku kuma dhaqmo walxaha aashitada leh iyo walxaha aasaasiga ah ee jawiga CO iyo
N2. Sidaa darteed, TiN crucible waa weel aad u fiican oo lagu baranayo isdhexgalka u dhexeeya birta dareeraha ah iyo walxaha qaarkood. TiN waa la kululeeyaa si looga lumiyo nitrogen-ka faakiyuumka si loo soo saaro nitride titanium leh maadad nitrogen hooseysa.
TiN waxay leedahay midab dahabi ah oo soo jiidasho leh, barta dhalaalaysa ee sare, adkaanta sare, xasiloonida kiimikada wanaagsan, qoynta yar ee qalabka dhismaha birta, iyo habsami u socodka iyo superconductivity, taas oo loo isticmaali karo qalabka dhismaha heerkulka sare iyo qalabka maaraynta.
Nitride Titanium waa nooc cusub oo ah qalab ilmo galeen ah oo shaqeynaya oo leh dhibic sare, adkaansho sare iyo isugeyn hooseeya, taas oo ah hagaha wanaagsan ee kuleylka iyo korantada. Marka hore, titanium nitride waa qalab qaab dhismeed aad u wanaagsan oo loogu talagalay qalabka dhoobada xoogga sare leh, dabaysha diyaaradda uumiga, iyo gantaallo. Intaas waxaa sii dheer, titanium nitride wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan yar oo khilaaf ah waxaana loo isticmaali karaa inuu yahay saliid heerkulkeedu sarreeyo.
Nitride Titanium oo loogu talagalay biinanka iyo siddooyinku waxay muujinayaan natiijooyin aad u fiican. Nitride Titanium waxay leedahay hanaan sare oo loo isticmaali karo sida koronto elektarol milix milix leh, iyo sidoo kale barta xiriirka, caabbinta filimka iyo agabyada kale. Nitride Titanium waa shey heer sare ah oo heer sare ah oo heer kul heer sare ah.
Hore: Hafnium Nitride Powder, HfN
Xiga: Budada Magnesium Nitride, Mg3N2
Titanium nitride budada
Warshadaha budada Titanium nitride
Titanium nitride Warshad
Soosaaraha budada nitride Titanium
Soosaarayaasha budada nitride
Titanium nitride Qiimaha budada
Xigashooyinka budada nitride Titanium